ICatalonia ingaphelelwa ngamabhishi ngenxa yokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ICatalonia ingaphelelwa ngamabhishi ngenxa yokushisa komhlaba
ECatalonia izinga lokushisa lizokwenyuka ngo-0,8ºC eminyakeni eyishumi ezayo ngokusho kombiko wesithathu wokuguquguquka kwesimo sezulu eCatalonia (TICCC), kungabulala ukushisa kwamagagasi okushisa kusuka ku-50 / ngonyaka namuhla kuye ku-2500 ngo-2050.
Kepha ngeke nje kuphela babhekane nale nkinga, kodwa futhi nokunyamalala kwamabhishi okungenzeka, ngoba, ngokusho kombiko, ngasekupheleni kwekhulu leminyaka kuze kube yingxenye yesihlanu yamabhishi kuzodinga ezinye izindlela zokulungisa.
Futhi, izinga lokushisa lingakhuphuka ngo-1,4ºC njengoba kulinganiselwa ngabososayensi abayi-140 ababambe iqhaza kulo mbiko. Kungazwakala njengokuningi, kepha empeleni, uma izinambuzane ezibanga izifo ezinzima ezifana nodenga noma umalaleveva zingafika futhi zidale izinkinga eziningi.
Uma i-mercury ku-thermometer ihlala iphakeme kunokujwayelekile isikhathi eside kunokujwayelekile, imililo eminingi yehlathi izokwenzeka nakanjani. Ukushisa nesomiso kujwayelekile eMedithera, kepha ngokwanda kuka-1,4 ofC, ubungozi bemililo buzokuba bukhulu kakhulu.
Ngokuphathelene nemvula, Kulinganiselwa ukuthi maphakathi naleli khulu leminyaka kuzoba nokwehla nabalamuleli abasondele ku- -10% entwasahlobo, ehlobo nasekwindla, okuyilapho kudingeka amanzi amaningi, ikakhulukazi ezinyangeni ezifudumele ngenxa yokufika kwezivakashi.
Idamu laseSau (Vic)
Futhi, njengoba ubusika buya ngokuqina futhi ihlobo lishisa kakhulu, i-jellyfish ne-algae enobuthi kunesikhathi esilula ukuphindaphindeka, kanti ezinye izinhlobo ezijwayelekile zasogwini lwaseCatalan ziya enyakatho.
Kodwa-ke, noma kucatshangelwa konke, amagesi abamba ukushisa ayaqhubeka ukukhishwa. Yize iCatalonia izamile ukuhlaziya umthelela wokuguquguquka kwesimo sezulu nokusebenzisa izinqubomgomo zokunciphisa nokuzivumelanisa nokuzama ukuzama ukumelana nakho, ngokusho kombiko, imiphumela yangempela yalezi zinyathelo ezithathiwe inciphile.
Ungafunda lo mbiko lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » ICatalonia ingaphelelwa ngamabhishi ngenxa yokushisa komhlaba
Ama-Collared Flycatchers, indawo yawo nokuguquka kwesimo sezulu
Iyini imiphumela yokuncibilika e-Arctic?